IiNdawo zeoyile zase-US-Funda ukuRhweba
tag: Ioyile yaseMelika
Ukujoliswa kweoyile e-US ePhakamileyo!
Ukuhlaziywa: 2 Juni 2021
Ioyile yase-US ithengiswa kwi-68.69 ngexesha lokubhalwa, ngezantsi kwe-68.86 ephezulu namhlanje. Ixabiso liphinde laqala ukukhula emva kwentlanganiso ye-OPEC. Ngokobuchwephesha kwaye ngokusisiseko, i-WTI inokuphinda ikhule kwakhona kwixesha elifutshane.
Ixabiso lihlanganisile namhlanje ukubonisa abathengi abomeleleyo. Izinzile kwinkalo yenkunzi yenkomo, ngenxa yoko sinokukhangela amathuba amatsha okuthenga. Asinakho ukubekela ecaleni ukwehla okwethutyana emva kwereali yangoku.
Ireyithi inokubuyela kuvavanyo kwaye iphinde ibuyele amanqanaba enkxaso kwangoko, amanqanaba okuxhathisa angaphambi kokutsiba ukuya kwinqanaba elitsha elitsha.
Ioyile yase-US yaphinda yaphinda yabuya ngoMatshi 8, 2021 ephezulu yenqanaba lama-67.94 eqinisekisa ukuphuma kwayo ngaphezulu kwalo mqobo. Ikwazile ukubuya ngaphezulu kokumelana neveki i-68.17 yenqanaba lokubonisa ukuba i-swing ephezulu inokuqhubeka kwakhona.
Ngoku ibekwe ngaphezulu komgca wokutyibilika (sl) wefolokhwe yokunyuka enyukayo emele uxhathiso olunamandla. Ukusilela kwayo ukufikelela kunye nokuzama kwakhona umgca we-median (ml) kubonisa iinkunzi ezomeleleyo. Sele uyazi kuhlalutyo lwam ukuba uqhawulo-mtshato olusebenzayo ngaphezulu komgca ophambili we-pitchfork ephezulu (UML) kwaye nge-66.58 iqinisekisa ukuqhubeka kokuzuza.
Okwangoku kufuneka silinde umqondiso omtsha wokuthenga, ukuthenga ithuba. Kuyingozi ukuyithenga malunga ne-68.85 yangaphambili.
Joyina iQela leVIP Telegraph APHA ukufumana isiginali yeoyile yaseMelika!
tags Ioyile yaseMelika, WTI, Ioyile yeWTI
Ioyile yaseMelika iQinisekisa ukuQhawulwa kwayo!
Ioyile yase-US yehle kancinci kwixesha elifutshane kodwa imbonakalo ihlala ihleli. Yehlile ukuvavanya kwaye iphinde ibuye amanqanaba enkxaso kwangoko ngaphambi kokutsiba phezulu. Ngokobuchwephesha, ukuqhekeka ngaphezulu kwamanqanaba oxinzelelo olomeleleyo kufutshane nokukhula okunokubakho.
Okwangoku, ireyithi inokuhamba ecaleni ngaphambi kokuphinda inyukele phezulu. Ioyile yase-US yahlangana emva kokuba i-US Crude Inventories ikhutshwe ngoLwesithathu. Isalathi sezoqoqosho sehle ukusuka kwi-1.3M ukuya kwi -1.7M kakhulu ngaphantsi kwe -1.0M elindelekileyo.
Uhlalutyo lobuGcisa beTshathi ye-H4 yeTshathi ye-HXNUMX!
Ioyile yase-US inyuke kangange-67.49 ngolwesiHlanu isilela ukufikelela kuma-67.94 aphezulu aphezulu. Okwangoku, inqanaba likhuphe amanqanaba oxhathiso olomeleleyo, yiyo loo nto ixabiso linokuphinda likhule kwakhona.
Ekugqibeleni ikwazile ukuzinzisa ngaphezulu kwe-66.68 static resistance kunye nangaphandle komzimba we-pitchfork. Ndikuxelele kwiiseshoni eziphilayo okanye kuhlalutyo lwam lwangaphambili ukuba ukuphuma okuphezulu kwi-UML kunokuqinisekisa ukuqhubeka okuphezulu.
Ngoku yehlile ukuphinda uzame i-66.58 kunye nomgca ophakathi we-pitchfork (ml). Ukuhlala ngaphezulu kwala manqanaba kunye nokubhalisa indawo ephezulu ephezulu kunokubonisa ukukhula okunokubakho.
Ukuqhawuka kwayo ngaphezulu kwe-66.58 kunye nomgca ophezulu we-median (UML) kunokubonisa ukuzuza okungaphezulu ngaphambili. Inokunyuka ixesha elide ukuba ihlale ngaphezulu komgca ophakathi we-pitchfork (ml).
Phawula: Funda2 ayisiyo ingcebiso kwezemali. Yenza uphando ngaphambi kokutyala imali yakho kuyo nayiphi na impahla yezezimali okanye imveliso ebonisiweyo okanye umcimbi. Asinaxanduva lakho kwiziphumo zotyalo mali.
tags Ioyile yaseMelika, I-USOIL (WTI), WTI, Ioyile yeWTI
Ioyile yase-US ekuchaseni! Ukuqhubeka okanye ukubuyela umva?
Ukuhlaziywa: 5 May 2021
Ioyile yaseMelika iye yahlangana okwethutyana kwaye ngoku ikwi-66.51 xa ithelekiswa ne-66.17 ephezulu izolo. Ixabiso leoyile livulwe ngokushiyeka namhlanje ukubonisa abathengi abomeleleyo. Kuhleli ukubona ukuba ixabiso liya kusabela njani kwiiyure ezizayo njengoko inqanaba lifikelele kwindawo yokumelana ngokuqinileyo.
Umbono uyakhuthaza, ke i-WTI yeoyile inokuphinda iqale kwakhona nangona isiza kuncipha okwethutyana. Ixabiso lingabuya liza kuvavanya kwaye liphinde libuyise amanqanaba enkxaso kwangoko ngaphambi kokutsiba phezulu.
Ioyile ekrwada ye-WTI ifikelele kwi-66.58 static resistance phantse ukufikelela kumgca ophezulu we-pitchfork (UML). Umgca we-median ophezulu ubonwa njengobalulekileyo ekujoliswe kuyo kunye nomqobo.
Ukuqhawuka okusebenzayo ngaphezulu kwayo kungabonisa ukukhula okuthe kratya ukuya kuma-67.94 aphezulu-aphezulu. Ixabiso liye lenyuka kwakhona kuba i-USD ibikwinqanaba lokulungisa. Ngaphaya koko, ukusilela ukuzinza phantsi kwenqanaba lama-23.6% nangaphantsi komgca ophakathi (LML) kubonise ukuba ioyile yase-US izakuqala ukwanda kwakhona.
Ngexesha elifutshane, ukuqhawuka okungamanga ngaphezulu kwe-UML, ukwaliwa, kunokutyhala umgangatho. Ukwehla okuncinci kunokusinceda ukuba sibambe umfutho omtsha.
Nceda ujoyine iqela lethu le-VIP Telegram APHA ukuba ufuna ukufumana umqondiso olandelayo wokuthenga ioyile yase-US!
tags Uhlalutyo Technical, Ioyile yaseMelika, Ioyile yeWTI
Ioyile yaseMelika ikulungele ukuQhubeka nokuQhubeka kwayo!
Ukuhlaziywa: 28 April 2021
Ioyile yase-US (i-WTI) yehlile kancinci kodwa ulungiso lubonakala luphelile emva kokusilela ekuthatheni imiqobo esezantsi kwangoko. Uptrend omkhulu usasebenza, yiyo loo nto sinokubona ukukhula okungakumbi.
I-US iza kukhupha uluhlu lweoyile ekrwada kamva namhlanje. Isalathi kulindeleke ukuba sihle kwakhona kumhlaba ongalunganga, ukusuka kwi-0.6M ukuya -0.9M. Le meko inokunceda ixabiso ukuba lenyuke kwixesha elifutshane.
Ngokwenyani, ukuhla okukhulu kukhetho lwempahla ekrwada kufuneka kunyuse ioyile yase-US egcina umbono okhulayo.
Ioyile yase-US ifumene inkxaso eyomeleleyo kuma-56.24 ngezantsi komgca ophakathi ophantsi (LML) wefolokhwe yokuhla. Ukusilela kwayo ukuzinza phantsi kwenqanaba lokuphinda kubuyiselwe i-23.6% kubonise ukuba isigaba sokulungisa siphelile.
Ngoku kuthengiswa emva ngentla ye-pitchfork ye-median line (ML) ebonisa abathengi abanamandla kwixesha elifutshane. Ukuzinza ngaphezulu kwepivot yeveki (62.38) nangaphaya komgca ophakathi kunokuzisa ukungena okutsha kungekudala.
Nceda ujoyine iqela lethu le-VIP Telegram APHA ukuba ufuna ukufumana umqondiso wokuthenga kwioyile yase-US!
tags ioyile, Ioyile yaseMelika, WTI, Ioyile yeWTI
Ukulungiswa kweoyile yaseMelika kuphelile!
Ukuhlaziywa: 12 April 2021
Iindibano zeoyile zaseMelika namhlanje kwaye kubonakala ngathi zizimisele ukubuyela phezulu. Ithengiswa kwi-60.61 ngexesha lokubhalwa kwaye inokubetha phezulu ngokukhawuleza kungekudala. Njengoko sele uyazi, ixabiso lalikwinqanaba lokulungisa emva kokufikelela kwinqanaba le-67.94.
Ngokobuchwephesha, ixabiso leoyile ligqibe isigaba sokulungisa sexesha elifutshane kwaye ngoku inokukhulisa ukujikeleza okutsha okuphezulu. Ukuxabisa iCandio yeDola xa kuthelekiswa ne-USD kunceda ioyile ye-WTI ukuqala ukwanda kwakhona.
Uhlalutyo lweTshathi yeoyile ye-H4!
Ioyile yase-US ifumene inkxaso eyomeleleyo kumnxeba ophantsi we-pitchfork's low (LML) ebonisa ukomelela ngamandla. I-rally yanamhlanje ngaphezulu kwepivot yeveki (59.46) kunye nepivot yemihla ngemihla (59.47) ibonisa ukukhula okuthe kratya.
Ukusilela kwexabiso ukuzinza phantsi komgca ophakathi ophantsi (LML) kubonisa ukuba ukulungiswa kuphelile. Ioyile yase-US ibhajwe phakathi kwamanqanaba angama-62.01 kunye nama-57.24. Ukuqhekeka okuphezulu okuvela kule patheni kuqinisekisa irali eyomeleleyo.
Ukuqhekeka ngomsindo ngaphezulu kwe-R1 59.81 kwaye kwinqanaba le-23.6% kubonisa abathengi abomeleleyo. Ukuzinza ngaphezulu kwale miqobo kunokukhokelela ekujijeni okuqinileyo okuphezulu kwixesha elifutshane.